AKHRISO: Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo joojiyey dhexdhexaadintii ay kawadeen Mooshinka Muqdisho, Qaar is casilay & Guddiga oo la kala diray – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Guddiga Joogtada ee Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa yeeshay kulan gaar ah oo ay uga wada hadleen arrimaha ku saabsan Dhexdhexaadintii ay ka dhex wadeen golaha baarlamaanka khilaafkii ka taagnaa, waxayna si rasmi ah u cadeeyeen in ay kala direen guddigii howshaas ku jiray oo ay gabi ahaanba joojiyeen howlihii ay wadeen, ka dib markii ay u muuqdeen in aan waxba xal ah la gaari karin.
Guddiga sadex ka mid ah ayaa is casilay, waxayna cadeeyeen in guddigoodu uu go’aan rasmi ah ka qaadan waayay mudadii shalay ku e’ekeyd ee ahaa in mooshinku buray, in cod loo qaadana ay suuragali-weyday markii xubnaha guddiga Aqalka Sare laftirkoodu xiisadaha qeyb ka noqdeen.
Xubnaha is casilay waxaa ka mid ah Xildhibaan Maxamuud Axmed Maxamuud (Mashruuc), Jen, CabdiXasan Cawaale Qeybdiid & Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan, waxay cadeeyeen in aysan muuqan rajo wanaagsan oo laga qabi karro guul laga gaaro arrimaha socda.
Guddiga joogtada ah ayaa aqbalay soo jeedinta Is casilaada xubnahan, waxaana ku xigay Talaabada guddoonka Aqalka Sare ay gabi ahaanba ku joojiyen howlihii dhexdhexaadinta oo ay kala direen gudigiiba, waxaana muuqata in hadda halis siyaasadeed gudaha loo galay.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa dadaal xoog badan galiyey sidii meelmar looga dhigi lahaa dibu heshiisiin lagu guuleysto, balse waxaa muuqatay in aysan Madaxtooyada Soomaaliya marnaba doonin in xal siyaasadeed oo daganaansho leh la gaaro, waxayna taas bedelkeeda door biday qaadashada go’aamada sii hurinta arrimahan taagan.
hahahaahah dadka wahaabisimka aminsan shekadaas ha ku qudara qaatan, xataa amiirka sucuudiga sheegay in wahaabisimka reer galbedku dabada ka riixayeen,
hiiraan.com ka aqriso sheekadaas.
Hala kala diro kii iscasilay siduu rabuu waayay waana ceebeeyeen kuwaan nama matalaan mana istaahilaan in ay Baarlamaan noo fadhiyaan waa kaneeco haday dhiig ay dhuuqdo waydo way dhimanaysaa mooshin haday waayaan malaha wayba dhimanayaan .
waligey waan ogaa in wahabi munaafuq yahay